४७ छोराछोरीकी ४० वर्षीया आमा, नेपालकै धनी | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
उद्योगी व्यवसायी भन्छन्- सरकारी नीतिका कारण नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाएन
४७ छोराछोरीकी ४० वर्षीया आमा, नेपालकै धनी
access_time२०७६ साल पुष २७ गते, आईतवार ०२:१४ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मुख्य खबर​
‘गाह्रो छ,’ ४७ जना छोराछोरीका ४० वर्षीया आमा जुनु पुनमगरले मुख खोलिन्, ‘एकजना छोरा वा छोरीको जीवन बनाउन त सम्बन्धित अभिभावकलाई गाह्रो हुन्छ भने ४७ जना छोराछोरीको आमा बन्न त्यति सजिलो छैन ।’
त्यसो भए ४७ जना छोराछोरीको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाका लागि एउटी आमाले कसरी धानेकी होलिन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । ‘जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय’ भन्ने प्रचलित उखानझैं मगरले वास्तविक आमा हुनुको सुख–दुःख झेलेकी छन् ।
‘कसैले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर संस्थाको नाममा पैसा पठाइदिन्छन्,’ उनले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘दुई हजार ५०० को केक र त्यति नै रुपैयाँबराबरको मासु किन्छौं । उत्सव मनाउँदै खुसियाली साट्छौं । जन्मोत्सव मनाउन प्राप्त केही रुपैयाँ बचाउन सक्यौं भने एउटा खाना पकाउने ग्यास वा एक बोरा चामल किन्छौं ।’
सहृदयी मनकारीको सहयोगले ४७ जना बालबालिकाले जीवन पाइरहेका छन् । जीवनको गोरेटो पहिल्याउन लागिपरेका छन् । द्वन्द्वपीडित, भूकम्पपीडित र अभिभावकविहीन बालबालिकालाई वास्तविक जीवनपथमा डोर्‍याउन पटक्कै सजिलो छैन । ‘कहिलेकाहीं असाध्यै गाह्रो हुन्छ । तपाईंसँग कुराकानी (२०७६ पुस २५ गते) गरिरहँदा चामल सकिँदै गएको छ,’ समाजसेवी मगरले नलुकाइ भनिन्, ‘म आत्तिएकी छैन । मलाई विश्वास छ, मनकारी सहयोगी भेटिनेछन् ।’
संवत् २०६४ मा एकीकृत सृजनशील समाज नेपाल स्थापना भयो । उसले ०६९ मा १७ जना द्वन्द्वपीडित तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आश्रय दिन थाल्यो । त्यही संस्थामा हिजोआज ४७ जनाले आश्रय लिइरहेका छन् । संस्थापकले जुनु पुनमगरलाई स्वागत गरे । उनी संस्थामा आबद्ध भइन् ।
‘त्यतिबेला ?,’ उनले थपिन्, ‘संस्थाको अवस्था कमजोर थियो । म जोडिएपछि सञ्चारकर्मीसँग गुहार मागें । सबैले सकारात्मक सहयोग गर्न थाले । हिजोआज पनि गरिरहनुभएको छ । सहयोगीको सहयोगले जुनु पुनमगर ४७ जनाकी आमा भनिनयोग्य भएकी छन् ।’
एकजनालाई मासिक नौ हजार खर्च । नौ हजारका दरले ४७ जनाको मासिक खर्च चार लाख २३ हजार । कार्यालयीय र कर्मचारीसहितको खर्च जोड्दा मासिक पाँच लाख
रोल्पा, रुकुम, मुगु, कैलाली, हुम्लालगायत १२ जिल्लाका बालबालिकालाई आश्रय दिएको संस्थाले २८ छोरा र १८ छोरीको पालनपोषणमात्रै होइन, शिक्षादीक्षा दिँदै आएको छ । संस्थामा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको बाहुल्य छ । त्यसो हुनुको कथा त्यत्तिकै तीतो छ ।
‘संस्थामा तात्कालिक माओवादीका पूर्वलडाकुहरू पनि हुनुहुन्छ,’ उनले खुलस्त पारिन्, ‘उहाँहरू घर पुग्दा आफन्तविहीन, सहिदका छोराछोरीले हाम्रा बाआमा खोई ? भन्दै सोध्थे । तपाईंहरू अर्कोपटक घर आउँदा हाम्रा बाआमा पनि ल्याइदिनू है भन्थे । त्यस्तो कारुणिक अनुरोध सुनेपछि संस्थापक दाइहरूले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको हो ।’
संस्थाको मासिक खर्च पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । ‘एकजनालाई मासिक नौ हजार खर्च लाग्छ । नौ हजारका दरले ४७ जनाको मासिक खर्च चार लाख २३ हजार हुन्छ । कार्यालयीय र कर्मचारीसहितको खर्च जोड्दा मासिक पाँच लाख रुपैयाँले पुग्दैन ।’
कतिपय अवस्थामा असाध्यै गाह्रो हुन्छ । त्यतिबेला ऋण खोज्नुको विकल्प हुँदैन । ऋणले पनि धानेन भने उनले घरपरिवारसँग सहयोग माग्छिन् । ‘अहिले खाद्यपसलमा संस्थाले ८० हजार बुझाउन बाँकी छ । दैनिक एक बोरा चामल सकिन्छ,’ उनले वास्तविकता बताइन्, ‘मासिक ६–७ वटा ग्यास चाहिन्छ । जाडोमा त त्यतिले पनि पुग्दैन । हामीले एकैपटक ३०–४० बोरा चामल किन्छौं । बोराका बोरा दाल चाहिन्छ । चाउचाउ खाजा खाने हो भने एकपटकलाई दुई काटुन चाहिन्छ । तीन दर्जनभन्दा बढी त बिस्कुट नै चाहिन्छ ।’
जब सात बोरा चामल बाँकी रहन्छ नि, तब उनी तनावमा हुन्छिन् । संस्थागत तनाव जतिसुकै भए पनि आफूवरिपरि छोराछोरी देखेपछि उनी खुसी हुन्छिन् । छोराछोरीका माया उनलाई तनाव व्यवस्थापन गर्ने ‘क्याप्सुल’ बनेको छ ।
जेठो छोरा उज्ज्वल बुढामगरले बुहारी भित्र्याइसकेका छन् । नातिनी एक वर्षकी भइसकिन् । जुनुले आमामात्रै होइन, हजुरआमासमेत बन्ने शौभाग्य पाइन् । स्नातक गरेका उज्ज्वल वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने अन्तिम तयारीमा छन् ।
सहिद परिवारका मगरले बुवाको अनुहार देख्न पाएनन् । आमाले दोस्रो बिहे गरिन् । त्यतिबेला बाटो हराएका यात्रुजस्तै बनेका उनलाई संस्थाले नयाँ जीवन दियो । जन्म दिने आमाबाबुको अनुहारसम्म नदेखेका उनी जुनु पुनमगरजस्ती ममतामयी आमा पाउँदा कम्ती खुसी छैनन् । जुनुले चेतना बुढामगरको पनि बिहे गरिदिइन् । एसईई तयारी गर्दागर्दै चेतनाले बिहे गर्छु भनेपछि उनले नाइँ भन्न सकिनन् ।
६ देखि १८ वर्षीय छोराछोरीले घेरिएकी उनले शैक्षिक अध्ययन अतिरिक्त निशा रोकामगर र अनुप घर्तीमगरलाई ‘ट्राभल’सम्बन्धी तालिम गराउँदै आएकी छन् । ११ कक्षामा अध्ययनरत मगरद्वयले उनीहरूकै रुचिअनुसार तालिम गरिरहेका हुन् । शैक्षिक अध्ययन सँगसँगै उनीहरूलाई सीप सिकाउन लागिपरेकी छन् ।
जनवादी कलाकार, समाजसेवी, भलिबल खेलाडीको फराकिलो परिचय बनाएकी जुनु विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध छिन् । त्यही परिचय र उपस्थितिले उनलाई सहयोग गर्नेको कमी छैन । संस्थागत कामकाजको बाँडफाँड गरिएको छ । ‘अध्यक्षज्यूले प्रशासनिक काम हेर्नुहुन्छ । उपाध्यक्षज्यू होस्टेल इन्चार्जको भूमिकामा हुनुहुन्छ,’ उनले जानकारी गराइन्, ‘मचाहिँ आर्थिक पाटो हेर्छु ।’
कसको कपडा, जुत्ता, मोजा फाटेको छ । कसलाई के चाहिएको छ ? त्यसको व्यवस्थापन उनैले गर्नुपर्छ । सबैका ममतामयी आमालाई ४७ जना छोराछोरीको नाम कण्ठ छैन । तर, पाँचदेखि १८ वर्षसम्मका छोराछोरीलाई गर्ने व्यवहार र मायाममतामा भेदभाव गर्दिनन् । संस्थामा आश्रय लिन चाहनेलाई उमेरको हदबन्दी छैन ।
सेना बनेर इतिहास रोकामगरले सुनको पाउजु ल्याइदिने वाचा गर्दा जुनु पुनमगरलाई राष्ट्रकै धनी भनेर जिकिर गर्न रहरमात्रै होइन, कर लाग्छ
जहाँ पुगौंला, त्यहीं आगो फुकौंला भन्ने नेपाली उखानसँग उनी जानकार छिन् । उनको समाजसेवा देखेर घरपरिवार त्यत्तिकै खुसी छन् । त्यसैले खुट्टा तान्नेसँग उनले सिँगौरी खेल्न सकेकै छिन् । खुट्टा तान्न खोज्नेले खुट्टा कहाँनेर टेकेका छन् भन्ने उनले भेउ पाइहाल्छिन् ।
सुखौरा, बाग्लुङका बलबहादुर पुन लाहुरे थिए । लाहुरेमात्रै भनिए उनको परिचय अधुरो हुन्छ । समाजसेवी पुन बाजेको रगत नातिनी जुनु पुनमगरमा पनि सर्‍यो । उनले बाजेकै पाइला पछ्याइरहेकी छन् ।
‘यसरी त अब सक्दिनँजस्तो लाग्छ,’ उनी भावुक देखिइन्, ‘राज्यको ढोका ढकढकाएकै हो । तर, के पुग्दैन के । वास्तवमा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाका लागि राज्यले हेर्नुपर्ने । अन्त्यमा केही गर्न सकिएन भने नेताको घर–घर पुग्नैपर्छ । सकिन्जेल आफैंले गर्ने हो ।’
‘म त राष्ट्रकै धनी हुँ । मेरा छोराछोरी भोलिका राष्ट्रनायक हुन् । मलाई जसले सहयोग गरेका छन्, उनका पनि छोराछोरी हुन् । मैले वारिकालाई पारि र पारिकालाई वारि पुर्‍याउने पुलको काममात्रै गरिरहेकी छु,’ उनी एकाएक उज्यालो देखिइन्, ‘सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा दुई कक्षामा अध्ययनरत सात वर्षीय सन्तोष बुढामगर प्रधानमन्त्री, नौ वर्षीय भीमराज घर्तीमगर माओवादीको ठूलो नेता, इतिहास रोकामगर सेना र अधिकांश छोरीहरूको नर्स बन्छु भनेपछि म राष्ट्रकै धनी होइन त ?’
सेना बनेर इतिहास रोकामगरले सुनको पाउजु ल्याइदिने वाचा गर्दा जुनु पुनमगरलाई राष्ट्रकै धनी भनेर जिकिर गर्न रहरमात्रै होइन, कर लाग्छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा २९३ जनामा कोरोना संक्रमण : संक्रमितको संख्या १५,७८४ पुग्यो
कक्षा ११ को परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्यांकन गरिने